ပြည်ပက သွင်းရတော့ ဘဏ္ဍာငွေကုန်တယ်..
အဲဒါကို ဖြေရှင်းဖို့.. လောင်စာသုံးစက်တွေဝယ်သုံးရတယ်
အဲတော့ နိုင်ငံခြားကသွင်းရတယ်.. ၊နိုင်ငံခြားငွေကုန်တယ်.
တယ်လီဖုန်း အင်တာနက်ဆက်သွယ်ရေးစနစ်တွေ ပြတ်တောက်တယ်.
စီးပွားရေး နဲ့ သတင်းအချက်အလက် ဆိုင်ရာနောက်ကျပြီး ဆုံးရှုံးမှုများစွာဖြစ်တယ်.။
မီးပြတ်တော့..ဆေးရုံဆေးခန်းစတဲ့ ကျန်းမာရေးဌာနတွေ..အခက်အခဲဖြစ်တယ်.. ၊ဆရာဝန်တွေဝန်ပိုကြီးပြီး..လူနာတွေဒုက္ခရောက်တယ်.၊
အဲဒီအတွက်..မီးရချင်လို့ တရုတ်နဲ့ထပ်ပေါင်းပြီး ရေအားလျပ်စစ်တွေထုတ်ပြန်တယ်..
တရုတ်က...သူ့အတွက် ရ၅ ရာခိုင်နှုန်းလောက် မီးပေးမှ လုပ်ပေးတယ်..၊